Nepali Rajneeti | ७ दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गरौं !
माघ २७, २०७७ मंगलबार ६३८ पटक हेरिएको
७ दि’न भि’त्रमा त’पाइले न’सोचेको का’म ब’न्नेछ बि’ल्कुलै बे’वस्ता न’गर्नुहो’ला !!!
अन्य’था अनि’स्ट हुने’छ बरिस्ठ3जाना पन्डित ले गेरेन्टी दिनु भयो ॐॐ साथै यो पेज माथी ला’इक गर्नु न’भुल्नु होला! ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ ॐ
यो पनि पढ्नुस : परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ? किन के का लागि पुजा गर्छन । अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन ।
स्कन्दपुराणमा आकाश स्वयंम लिं’ग हो भनिएको छ । शिवलिंग वातावरणसहित घुमिरहेको धर्ति तथा सारा अनन्त ब्रह्माण्डको अक्ष धुरी नै लिं’ग हो । शिवलिं’गको अर्थ अनन्त हुन्छ ।
हामीलाई नै थाहा छ, एउटा शब्दलाई भिन्न—भिन्न भाषामा अलग—अलग अर्थ निकाल्न सकिन्छ ।
जस्तोः प्रकाश स्तम्भ/लिं’ग, अग्नी स्तम्भ/लिं’ग, उर्जा स्तम्भ/लिं’ग आदि । ब्रह्माण्डमा दुई चीज छन् उर्जा र पदार्थ । हाम्रो शरीर पदार्थबाट निर्मित हुन्छ भने आत्मा उर्जा हो ।
यसै प्रकारले शिव पदार्थ र शक्ति उर्जाको प्रतीक बनेर शिवलिं’गका रुपमा चिनिन्छ ।ब्रह्माण्डमा उपस्थित सबै ठोस तथा उर्जा शिवलिं’गमा निहित हुन्छ । वास्तवममा शिवलिं’ग हाम्रो ब्रह्माण्डको आकृति हो ।